Loharano ho an'ny latsaky ny 12 taona - The Reward Foundation
Home Momba anao Loharano ambanin'ny 12 taona
Ny loharano amin'ity pejy ity dia mety latsaky ny 12 taona. Mifantoka amin'ny fanampiana ny ankizilahy izy ireo, fa ny ankizivavy koa mety hahita azy ireo ho mahasoa.
Eny, voajanahary tanteraka ny te hahafanta-javatra momba ny firaisana, indrindra mandritra sy aorian'ny fahamaotiana. Na izany aza, ny karazana firaisana ara-nofo miseho amin'ny pôrnôgrafia an-tserasera dia tsy natao hanampiana anao hahita ny tena maha-ianao anao. Tsy manampy anao hianatra momba ny fitiavana firaisana ara-nofo koa izany. Fa ny tanjony dia ny hanaitra ny fihetseham-po mahery vaika ao aminao ka maniry ny hiverin-dàlana bebe kokoa ianao.
Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia indostrian'ny varotra mitentina amina miliara. Misy ny mivarotra anao dokam-barotra sy manangona mombamomba anao manokana. Ity fampahalalana ity dia amidy amin'ny orinasa hafa hahazoana tombony. Tsy misy izany tranonkala tranonkala vetaveta maimaimpoana izany. Misy atahorana ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana ary ny fivelaran'ny fifandraisana. Ny pôrnôgrafia dia mety hanimba ny zava-bita any am-pianarana ary hitarika any amin'ny fanaovana heloka bevava.
Ny lalàna vaovao momba ny Harms an-tserasera dia iadian-kevitra ankehitriny ny Parlemanta UK.
“Zavatra tsy fantatrao momba ny pôrnôgrafia” dia novolavolaina niaraka tamin'ny fanampian'ny raim-pianakaviana iray izay mampianatra siansa. Manampy ny ankizy, ny ray aman-dreny ary ny mpampianatra ho tonga fahalalana momba ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana sary vetaveta. Miorina ara-tsiansa sy tsy mpivavaka, "Zavatra tsy fantatrao momba ny pôrnôgrafia" dia mamaritra ny fandrika mety hitranga amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny teny tsotra sy mora azo. Izy io dia miteraka fampitahana eo amin'ny sakafo tsy misy fotony sy pôrnôgrafia, ary manazava ny antony mahatonga ireo hetsika ireo hanana "fiofanana" ny ati-doha, ary lasa fahazarana tsy salama. Io dia ahafahan'ny tanora misafidy bebe kokoa momba ny zavatra mety hampiankin-doha.
“Zavatra tsy fantatrao momba ny pôrnôgrafia” dia andiany misy fizarana telo ary misy ao amin'ny YouTube.
Fizarana 1 (9.24)
Fizarana 2 (9.49)
Fizarana 3 (7.29)